ကျော်ဟိန်းသတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျော်ဟိန်းသတင်း
Posted by researcher on Jul 6, 2011 in Copy/Paste | 31 comments
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကျော်ဟိန်းကို ရွာသာကြီးပို့လိုက်ပြီလို့ သတင်းကြားပါတယ်။ သတင်းမှန်သိသူများ ရေးသားပေးစေလိုပါတယ်။
ဖွတာမဟုတ်ပါ။ သတင်းမှန်၊ မမှန်သိချင်လို့ပါ။
ကျော်ဟိန်းသတင်းဆိုလို့ သတင်းတွေ တကယ်ဖတ်ရပြီ မှတ်နေတာ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါ။ ခုမှသိချင်လို့ ၀င်ဖတ်မိတာပါရှင်။ ခေါင်းစဉ်က သိချင်လို့ပါဆို ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်နော်….
အဲတော့် .. ဘယ်လိုများဖြစ်ရပြန်တာလဲ….
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ… သက်ဆိုင်ရာဌာနကတဆင့် စုံစမ်းပေးပါ့မယ်….
မနောပြောသလိုပဲ ခေါင်းစဉ်ကို ဆီလျော်အောင်ပေးတာ ပိုကောင်းပါမယ်။ ကျွန်တော်လဲ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ သုံးလိုက်မိပါတယ်။ နောက်ပြီးဒီသတင်းက တခြားသူတွေ သိပြီး၊ ကြားပြီးသားလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပါမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အခုမှသိလို့ မေးကြည့်တာပါ။ မယုံလို့ကိုမေးကြည့်တဲ့သဘောပါ။ နောက်ပြီး post အနေနဲ့တင်မှပဲ ဖတ်မိပြီး ဟုတ်၊ မဟုတ် သိတဲ့သူက ပြန်ပြောနိုင်မယ်လေ။ ကောလဟာလဆိုလဲ ကောလဟာလပေါ့။ creative writing မဟုတ်ပဲ post အနေနဲ့ တင်ဖြစ်သွားတာ တောင်းပန်ပါတယ်။ point လိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်သာ ရေးလိုက်တာပါ။ ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးကို သီးခြားရေးလို့ရတဲ့ နေရာလေးရှိရင်ကောင်းပါမယ်။ ရှိတယ်ဆိုလဲ သိသူများပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။
ထပ်တောင်းပန်ပါတယ်။ sorry ပါ။
အပုလေးလဲ အဲဒီလို ကြားထားပါတယ် ။
To admin မှာ အခုလောလောဆယ် comment ရေးလို့မရဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီမှာပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။
MG မှာ Point တွေနဲ့မပတ်သက်တဲ့၊ လွပ်လပ်စွာရေးသားလို့ရတဲ့ နေရာလေး တစ်ခုဖန်တီးပေးရင်သိပ်ကောင်းပါမယ်။ Forum ဆိုလဲ Forum ပေါ့။
ဖိုရမ်ထားဖြစ်ရင် ကောင်းပါတယ် “လင်းဝေကျော်” ကလည်း အဲဒီအကြောင်းပြောချင်တာ ဖိုရမ်မရှိလို့ ပို့စ်တင်ထားပါတယ် ၀င်ထောက်ခံပေးလိုက်ပါဦး
တရားအားထုတ်တာ လမ်းကြောင်းတွေ အလိုက်မှားလို့ ဂေါက်သွားတာ ဖြစ်မှာပေါ့.. သူနဲ့ ဆရာတော် ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ နဲ့ တရားဆွေးနွေးတဲ့ ဖိုင် နားထောင်ရတယ်။ တရားနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သိပ်တော့ မဟန်ဘူး။ အထင်ကြီးတာတွေ များနေတာတွေ့ရတယ်။
တရားနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သိပ်တော့ မဟန်ဘူး။ အထင်ကြီးတာတွေ များနေတာတွေ့ရတယ် ဆိုတာ ကျော်ဟိန်းမှာ တွေ့တာလား၊ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသမှာ မှာ တွေ့တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဦးစလုံးမှာ တွေ့တာလား။
ကျုပ်ကတော့ နှစ်ဦးစလုံး ဘ၀င်မြင့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးနေတာတွေ တွေ့နေရတယ်။
ကျော်ဟိန်းကလည်း ဘယ်သူမှ ဆရာတင်ချင်တဲ့ပုံ မပေါ်ပဲ ကိုယ်တိုင် ဆရာကြီး လုပ်ချင်နေပုံပဲ။
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသကလည်း လမ်းညွှန်တာ တရားကိုမပြောပဲ၊ စာထဲက စကားတွေပဲ လျှောက်ပြောနေတော့ လိုရင်း မရောက်ဘူး။
အင်းလေ – – – သူက စာထဲကပဲသိတော့ စာထဲက မှတ်တမ်းတွေပဲ မှန်းပြောရမှာပေါ့။
စာနဲ့ မညီရင် တရားမဟောနဲ့ဆိုတာ ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ တရားသဘောကို ကျော်သွားပြီး။
အဲဒါ စာမာန်တက်နေတဲ့ စကားပဲ။ ကာလာမသုတ် တရားတော်ကို လုံးလုံး ဆန့်ကျင်သွားပြီ ။ ။
အင်း – – – ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေက ရှေ့တန်းရောက်နေကြတော့ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် ရင်လေးပါတယ်လေ . . . . ။
ဒေါ်ဆူးရေ … နားထောင်လို့ရမဲ့အခြေအနေလေးညွှန်းပါလား ..။ သူရဟန်းဝတ်ကထဲက ပြောတာတွေက
သူနာမည်ကြီးချင်တာတွေပါနေလို့ .. သိပ်တော့အားမရလှဘူး ..။ နာမယ်ကြီးချင်တဲ့စိတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မင်းသားလုပ်ချင်တဲ့စိတ်က ရဟန်းဝတ်သွားတဲ့အထိပါသွားတယ်ထင်ပါတယ်။
အကျင့်ဆိုတာဖျောက်ရခက်တာကိုး ..။ ကျနော်တို့လဲဒီလိုပါဘဲလေ ..။
ဦးဖက်ရေ http://www.yinthinnei.blogspot.com/ မှာတင်ထားတဲ့ အသံဖိုင်လင့်ခ်ပါ။
မာနအကြောင်း အနုစိတ်သုံးသပ်ပြတာ အရမ်းကောင်းတယ်
ပါမောက္ခချုပ်ကြီးလည်း ကိုယ့်ရဲ့ စာမာန်မာန အကြောင်းလည်း အနုစိတ်သုံးသပ်ဖို့လိုပြီ။
မနောက်နဲ့နော် သိချင်လို့ လာကြည့်တာ……..
ဘိုကျော်ဟိန်း တရားဟောတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂဂနန သိချင်ရင် ` ဦးတင်ဦး ကျူရှင် ´ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေး ကို တစ်ခါလောက် ဖတ်ကြည့်ကြပါ လို့ ညွှန်းဆိုပါရစေ နော် ။
ဟုပ်ကဲ့ ကျနော့် ဂျီးဒေါ်ကြီး နေမကောင်းဘူးလို့ကြားပါတယ်၊ MG မှတဆင့်မေးပေးပါလားခင်ဗျာ….
လူသာူအားလုံးကိုလေးစားတယ်ဗျာ … ဘာသတင်းမှမကြားဘူး … အခြေအနေတော်တော်စိုးနေလို့လားမသိဘူး
ကျော်ဟိန်း ကျော်ဟိန်း သူကတော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် သူနာမည်ကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့လူပဲဗျ.။
အဘိဓမ္မာ မတတ် ဘာမတတ်။ ဓမ္မာစရိယလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ သူအထင် သူအမြင် သူအရူးစိတ်တွေနဲ့ ရွာတွေ တောတွေက လူတွေကို အဓမ္မ တရားတွေဟောလို့ဟော..။ ဘုန်းကြီးဝတ်ခါနီးတောင် စပွန်စာ ဗလဗွ နဲ့ ကြော်ငြာတွေရိုက်ပြီမှ ဘုန်းကြီးဝတ်ရှာသတဲ့..။ နောက်ဆိုသေး ဒင်းက ပိဋိကပ် သုံးပုံဆိုတာ တကယ် ရှိလို့လားလေးဘာလေးနဲ့။ နောက် ဆရာရှိသလားမေးရင် ကျုပ်ဆရာ က ဂေါတမ တဲ့ လာလာချည်းသေး ဘုရားနဲ့တောင်ကိုင်ပေါက်လိုက်သလေး။ အခုကြားရသလောက်ကတော့ တရားဟောရင် ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ ပဲခူးက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အယူလွဲတွေအဟုတ်လုပ်လို့ ခိုးပြီးတရားဟောနေသတဲ့..။
Magazine interview တွေမှာ သူပြောတုန်းကလဲ သူု့.သားသမီးတွေ အရမ်းတော်တယ်တဲ့
သူတို. ဆွေးနွေးတာတွေက သိပြီး တတ်လွန်းနေတယ် သူတို.က အတတ်လွန်နေတာလို.ထင်တယ်
တစ်ခါက ကျော်ဟိန်းတို. အဖွဲ.အစည်းက ပြောထားတာ တစ်ခုပြောပြမယ်
မြတ်စွာဘုရားက တဏှာစိတ်ရှိတယ်တဲ. အဲဒါကြောင်. သူ.ရဲ့.သား ရာဟုလာ ကိုမွေးတာပါတဲ.
နောက်ပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လိင်ဆက်ဆံပြီးမယူတာ ငရဲမကျဘူးတဲ.